စိတ်ကူးပျော်ရာ: May 2015
မဟာသမယအခါတော်နေ့ ကျင်းပရခြင်းအကြောင်း နှင့် နယုန်လပြည့်နေ့၏ ထူးခြားချက်များ”
နယုန်လပြည့်နေ့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အဖို့ ငြိမ်းချမ်းရေးမှတ်တိုင်ကို စိုက်ထူနိုင်သော သမိုင်းဝင် နေ့ထူးနေ့မြတ်ကြီးဖြစ်ပါသည်။မြတ်စွာဘုရားသည်ထိုနေ့၌ ကပိလဝတ်ပြည်
မဟာဝုန်တောကြီးအတွင်း မဟာသမယသုတ်ဟောကြားတော်မူသည်ကို အကြောင်းပြု၍
နယုန်လပြည့်နေ့၌ “မဟာသမယအခါတော်ပွဲ” ကျင်းပရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(၁)။ ရေလုပွဲ ဆင်နွှဲကြသော တောင်သူလယ်သမားတို့ ငြင်းခုံ ခိုက်ရန်ဘေးမှကင်းဝေးခြင်း။
(၂)။ ကပိလဝတ် နှင့် ကောလိယ နှစ်ပြည်ထောင် စစ်ခင်းတော့မည့် ဘေးအန္တရာယ်မှကင်းဝေးပြီး၊
(၃)။ နတ်၊ဗြဟ္မာ၊အသူရာ နှင့် ဂဠုန်၊နဂါးများ၊ရဟန်းတော်များ ဤ-တစ်ကြိမ်တည်းသာစုရုံးမိသောနေ့ဖြစ်ခြင်း။
(၄)။မင်းသားငါးရာ သာ့သနာဘောင်သို့ ဝင်ရောက်သောနေ့ဖြစ်၍ ထူးခြားခြင်း။
(၅)။ရဟန်းတော် ငါးရာလုံး ရဟန္တာချည်းဖြစ်သောနေ့ဖြစ်၍ ထူးခြားခြင်း။
(၆)။ “နိမ္မိတဘုရား” ကမေး၍ “ပကတိဘုရား” ကဖြေဆိုသည်ကို နာရသောကြောင့် ထူးခြားခြင်း။
(၇)။မဟာသမယကို အကြောင်းပြု၍ ဂဠုန်နှင့်နဂါးတို့ခိုက်ရန်မဖက် မေတ္တာသက်ဝင်သောနေ့ဖြစ်၍ ထူးခြားခြင်း၊
(၈)။မဟာသမယဆိုင်ရာ သုတ္တန် ၇မျိုးကို ဟောကြားသော နေ့ဖြစ်၍ ထူးခြားခြင်း။
(၉)။ဘိက္ခုနီသာသနာ လမ်းစပေါ်သောနေ့ဖြစ်၍ ထူးခြားခြင်း။
ဤထူးခြားမှုများကို အာရုံပြု၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့က နယုန်လပြည့်နေ့ကို မဟာသမယ အခါတော်နေ့
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 08:43:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 08:34:00 AM No comments:
သွားကျန်းမာရေးလိုက်စားခြင်းသည် ကောင်းမွန်သော အလေ့အကျင့်ဖြစ်သလို၊
သွားများတွင် ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ် ပါက၊ မမျှော်မှန်းနိုင်လောက်သည့်
နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတို့ အပြင် စိတ်ဖိစီးမှုများလည်း ဖြစ်စေတတ်ပေရာ၊
အောက်ပါနည်းလမ်းအသွယ် သွယ်တို့ ဖြင့် ဆင်ခြင်နေထိုင်ကြပါစေကြောင်း
(၁) ဖလူအိုရိုက်(ဒ်)ဒြပ်ပေါင်းပါသော သွားတိုက်ဆေးဖြင့် တနေ့ လျှင်
အနည်းဆုံး ၂-ကြိမ်မျှသွားတိုက်သော အလေ့အကျင့် ကောင်းကို မွေးမြူသင့်သည်။
ညအိပ်ယာဝင်ခါနီးသွားတိုက်ခြင်းသည် သွားနှင့်ခံတွင်းကို တညတာလုံးသန့် ရှင်းစေသ
လို၊ နေ့ လည်ဘက် အစာစားပြီးတိုင်းသွားတိုက်ခြင်းကလည်း
အစာဟောင်းအပိုင်း အစများမှ အဆိပ်အတောက်ကင်းစေကာ
(၂) မှန်ကန်သော သွားတိုက်နည်းပုံစံမှာ သွား၏ နောက်ကျောဘက်ခြမ်းနှင့်
သွားဖုံးများတွင် ဗက်တီးရီးယားနှင့်အတူ သွားချေးများ
လက်ဖြင့် ၄၅ံစောင်း၍ ဒေါင်လိုက်တိုက်ပေးသင့်သည်။ သွားနှင့် သွားခြေတို့ ကို
စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် ခပ်မှန်မှန်အားဖိ၍တိုက်ပေးရမည်။ ခပ်ကြမ်းကြမ်းတိုက်ပါက
သွားဖုံးကို ပွတ်ခြစ်မိကာ သွေးထွက်စေနိုင်သလို၊ ခပ်ဖွဖွတိုက်လျှင်လည်း
သွားချေးမစင်တတ်ပါ။ အချိန် ၂-မိနစ်ကြာအောင် ခံတွင်း ထဲရှိသွားအားလုံးကို
ရှေ့ -နောက်-အပေါ်ဘက်ပေါင်းစုံတိုက်ပြီးနောက်၊ သွားတိုက်ဆေးကုန်စင်အောင်
ရေများများဖြင့် ပလုပ်မကျင်းပါနှင့်။ သွားတိုက်ပြီးတိုင်း ခံတွင်းသန်
့စင်ရည်သုံးသည့် အလေ့အကျင့်ကောင်းကိုမွေးမြူပါ။ ရင်သွေးငယ် များအား
သွားစပေါက်သော အရွယ်မှစတင်၍ သွားတိုက်ပေးသင့်ပါသည်။
(၃) သွားကြားသန့် ရှင်းရန်သုံးသည့်ချည်မျှင် (သို့ မဟုတ်)
သွားကြားထိုးသွားတိုက်တံ အကူအညီယူ၍ သွားကြိုသွားကြား နှင့် အောက်ချေတို့ကို
သန့် ရှင်းပေးရပါမည်။ သွားတိုက်ဆေးမသုံးဘဲ သွားတိုက်တံအခြောက်ဖြင့် တိုက်ပေး၍
ပလုပ် ကျင်းခြင်းကလည်း ချိုးကပ်နေသောသွားချေးများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။
(၄) သွားတိုက်သည့်အခါတိုင်း သွားတိုက်တံ (သို့ မဟုတ်) လျှာခြစ်တံကိုသုံး၍
တိုက်ပေးခြင်းဖြင့် လျှာပေါ်ရှိ အရိအရွဲများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး၊
ချွဲကပ်ခြင်းနှင့် ခံတွင်းရနံ့ ဆိုးခြင်း ပပျောက်ကာ၊ အရသာအာရုံကိုလည်း
(၅) သွားများပျက်စီးစေသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းထဲတွင်
သွားတိုက်ဆေးသည်လည်းတခုအပါအ၀င်ဖြစ်၏။ ထို့ ကြောင့် မိမိနှင့် ဓာတ်တဲ့သော
သွားတိုက်ဆေးကိုသာ ရွေးချယ်တတ်ရပါမည်။ ခံတွင်းသန့် ရှင်းစေရန် သွားတိုက်ဆေး
အများကြီး သုံးစရာမလိုပါ။ သွားတိုက်တံကို ၃-လလျှင် တစ်ကြိမ်မျှ
(၆) သွားတိုက်တံကြမ်းကြမ်းသည် အပေါ်ယံကြွေသွားအလွှာကို
ပါးလွှာ၍အစင်းကြောင်းထင်စေနိုင်သလို၊ အလွန်အမင်း မာကျောသောပစ္စည်းများကို
ကိုက်ဖြတ်ခြင်းနှင့် သွားဖောက်၍အလှဆင်ခြင်းတို့ ကလည်း သွားများအလွယ်တကူ
(၇) သန့် ရှင်းမှုမရှိသော သွားကြားထိုးတံသည် သွားဖုံကိုရောဂါရစေနိုင်သည်။
(၈) အဆက်မပြတ် သွားရည်စာ စားခြင်းကလည်း သွားချေးတက်၍၊
သွားအခေါင်းပေါက်ဖြစ်လာစေသလို၊ သကြား/ကပ်စေး နှဲ (သို့ မဟုတ်) အချိုဓာတ်ကဲသော
အစားအစာများကလည်း သွား၏ကြွေသားအပေါ်ယံလွှာကို ပျက်စီးစေ၏။ မာကျော သော
အစေ့အဆံများကို လျော့စားပေးခြင်းဖြင့် အံသွားများပက်ကြားအက်ခြင်းမှ
(၉) အချိုရည်ဖြင့် အာလုပ်ကျင်းခြင်းသည် သွားများကိုထိခိုက်စေ သဖြင့်
အရည်စုပ်တံဖြင့်သောက်ပါ။ ဖျော်ရည်ထဲတွင် ပါရှိသော အက်ဆစ်ဓာတ်များသည်
သွားကိုထိခိုက်စေသဖြင့် အနည်းငယ်မျှသာသောက်သုံးသင့်သည်။ အချို/အချဉ်နှင့်
ဖျော်ရည်များကို စားသောက်ပြီးနောက် ရေဖြင့်ဦးစွာပလုပ်ကျင်းပြီးမှသာ
သွားတိုက်ပေးသင့်သည်။ သို့ မဟုတ်ပါက သွားကျဉ်၍ကြွေသားကိုထိခိုက်စေသည်။
(၁၀) Bulimia (ခေါ်) အချိန်တိုအတွင်းအစားအသောက်များများစားပြီး
အန်ထုတ်ပစ်တတ်သောစရိုက်သည် အဆာအိမ်ထဲမှ ထွက်ရှိလာသော အက်ဆစ်ကြောင့်
(၁၁) ထမင်းစားပြီးတိုင်း အချိုဓာတ်မပါသော(သို့ မဟုတ်)အချိုနဲသော
ပီကေ၀ါးစားခြင်းသည် သွားကြားညပ်ခြင်းများကို သန့်စင်စေရုံသာမက၊
အာခံတွင်းလည်းမခြောက်စေပါ။ သို့ သော် ပီကေကိုအဆက်မပြတ်တနေကုန်နီးပါး ၀ါးခြင်းက
(၁၂) သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက် ၆-လ လျှင် တစ်ကြိမ် သွားဆရာဝန်ဖြင့်
ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုခံယူသင့်သည်။ အချို့ သော ပဋိဇီဝဆေးများသည် သွားဖုံးသွေးယို၍
အနာတရရောင်ကိုင်းစေသည့်အတွက် ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးမှ သောက်သင့်သည်။
(၁၃) လေးညှင်းပွင့်အဆီ (သို့ မဟုတ်) ဂျင်းအနှစ် (သို့ မဟုတ်)
ကုလားအော်သီးကဲ့သို့ အလွန်စပ်သောငရုပ်သီးအမှုန့် တို့ကလည်း
သွားကိုက်ခဲနာကျင်ခြင်းကို သက်သာစေ၏။ သို့ သော် သွားဖုံးနှင့် လျှာတို့ တွင်
မလိုလားအပ်သော အပူ လောင်မှုများ မဖြစ်စေရန် သတိပြု၍အသုံးပြုပါ။ သဘာဝ
ဖလူအိုရိုက်(ဒ်)ခံတွင်းသန့် စင်ဆေးရည်အဖြစ် လ္ဘက်စိမ်းရည် ဖြင့်
(၁၄) နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ ဆီးချို နှင့် ပေါင်မပြည့်သော
ကလေးငယ်ကိုအချိန်မတိုင်မီ မွေးဖွားခြင်းတို့ သည် သွားရော ဂါနှင့်
ဆက်စပ်လျှက်ရှိကြောင်း နိုင်ငံတကာသွား ဘက်ဆိုင်ရာပါရဂူများက အကြံပြုထားကြသည်။
(၁၅) သွားကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သော 90% အကြောင်းရင်းမှာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊
အရက်သောက်ခြင်း၊ ကွမ်းစားခြင်း၊ အပူအစပ်များ အလွန်အကျွံစားခြင်းနှင့်
ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်း၊ သွာပိုးချခြင်းမှာ နည်မှန်လမ်းမှန်မဟုတ်ကြောင်း၊
မှန်ကန်သောကုသနည်းမဟုတ်ဘဲ၊ ထိုအမှုန့်များ အစာအိမ် အတွင်းသို့
အလွန်အကျွံဝင်ရောက်ပါက အစာအိမ်ပေါက်သွားနိုင်ကြောင်း သွားသုတေသီများက
(၁၆) အမျှင်ဓာတ်များသော ဟင်းသီးဟင်းရွက် နှင့်သစ်သီးဝလံများ၊ သောက်ရေ၊
နို့ နှင့် အချိုလျော့နဲသောနို့ ထွက်ပစ္စည်း၊ မာကျောခြင်းမရှိသောအစေ့အဆံ၊ အမဲသား၊
ကြက်ဥ/ဘဲဥ/ငုံးဥ၊ ငါး၊ အာလူး၊ တို့ ဟူး၊ ပဲသီး၊ ကောက်နှံပင်၊ ကွေကာ အုပ်၊
ဂျုံ၊ စပါး၊ ပြောင်း တို့ သည် သွားကျန်းမာရေးအတွက်
(၁၇) သွားကျန်းမာရေးအတွက် စပျစ်သီးခြောက်၊ ဇီးသီးခြောက် နှင့်
အာလူးခြောက်ကြော်တို့အလွန်အကျွံစားခြင်းမှ ရှောင် ကျဉ်ပါ။
(၁၈) သွားများဖြူဝင်းစေရန်အတွက် ရက်သတ္တ ၁-ပတ်လျှင် ၄-ကြိမ်မျှ
သီးမွှေးဌက်ပျော်သီးအခွံ၏ အတွင်းသားဖြင့် သွား များကိုပွတ်တိုက်ပေးပါ။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 08:28:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 08:25:00 AM No comments:
နှစ်အတန်ကြာက ၀တ္ထုတို တစ်ပုဒ်ဖတ်ခဲ့ဖူးသည်။ ရေးသူကို မမှတ်မိတော့။ ၀တ္ထုထဲမှာ ဘတ်စ် ကားစီးရင်း ကိုယ့်ရှေ့မှာလာရပ် နေသည့် ကောင်မလေးကို ထိုင်ခုံ နေရာထပေးလိုက်သည်။ ကားက ကျပ်ညပ်နေသည်မို့ မိန်းကလေး ငယ်ကို ဦးစားပေးကူညီလိုက် သည့်သဘော။ နောက်တစ်နေ့အ ခြားဘတ်စ်ကားပေါ်မှာထိုကောင် မလေးကို သူ့ချစ်သူကောင်လေး နှင့်အတူ ထပ်တွေ့သည်။ သူ့ကို မြင်မြင်ချင်း ကောင်မလေးက ကောင်လေးကိုတီးတိုးပြောသည်။ ‘‘အဲဒီလူကြီးပေါ့ ချစ်ကိုနှာကျပြီး နေရာထပေးတာ’’ဟူ၏။ ထို ကောင်မလေး၏ သိမ်ဖျင်းယုတ် ညံ့သော အတွေးအခေါ်
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 08:19:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 08:16:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 08:14:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 08:11:00 AM No comments:
ကိုယ်နဲ့ရေရှည်လက်တွဲဖို့ အဆင်မပြေတော့တဲ့ ချစ်သူကို ဘာ့ကြောင့် မစွန့်လွှတ်နိုင်ကြတာလဲ
သင်ဟာ သင့် ချစ်သူအပေါ်မှာ ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ သည်းခံပြီး ဆက်လက် လက်တွဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ သင်ထင်ကောင်းထင်ပါမည်။ သို့သော် တကယ်တော့ တခြားအကြောင်းပြချက်ကြောင့် သင် သူနဲ့ ဆက် လက်တွဲနေတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ ဒါတွေက ဘာများပါလဲ။ ကိုယ်နဲ့ သဟဇာတ မဖြစ်တဲ့ချစ်သူကို လက်တွဲနေဟာ ကြီးမားတဲ့ပြသနာတစ်ခုပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒါဟာ ကိုယ်အပေါ် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး အပြန်အလှန်ပါရမီဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်မယ့် လက်တွဲဖော်ကို ရွေးချယ်နိုင်ခွင့် လျော့နည်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဦး စလုံးအတွက်လည်း မပြည့်စုံနိုင်မှု၊ အလိုမကျမှု၊ အမျက်ထွက်မှုတွေ တဖြည်းဖြည်း တိုးလာစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆိုဘာလို့ သူ့ကို လက်တွဲနေ နေသေးတာလဲ။
အဓိက အကြောင်းရင်းများက ဘာပါလဲ။
၁) ချစ်သူက အရမ်း ဆွဲဆောင်မှု ရှိလို့
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှုက သင်သူ့ကို ဆက်ပြီး ချစ်နေရခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းတွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ချစ်သူမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှု ရှိခြင်းကြောင့် မကြာခဏဆိုသလို သင့်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ မကောင်းတဲ့ အချက်တွေကို ရှာမတွေ့နိုင်လောက်အောင် သင့်မျက်စိကို ကန်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ ချစ်သူက အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပေမဲ့ စိတ်ဓာတ်ရေးရာမှာတော့ မရင့်ကျက်တဲ့ အပြုအမူမျိုး ဖြစ်နေပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ သူနဲ့အတူ လက်တွဲလာတာ ကြာလာတာနဲ့အမျှ သူ့ရဲ့ ရုပ်ရည်ရူပကာအပေါ်မှာ နစ်မျောပြီး ကောင်းကွက် တွေပဲ မြင်လာတာမျိုးပါ။
၂) ကိုယ့်အဖေ၊ အမေနဲ့ စရိုက်တူလို့
ဒီအချက်ကလည်း သင့်ချစ်သူကို မစွန့်လွှတ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ပါ။ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်အပေါ် ပြုမူပုံက မိဘတွေ ကိုယ့်အပေါ်ပြုမူပုံမျိုးနဲ့ဆင်တူနေရင်လည်း သူ့ကို သင် ချစ်မိသွားနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ - သင့်အဖေက ခပ်ဆိုးသွမ်းသွမ်း လူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို သင့်ချစ်သူမှာလည်း ဒီလိုအချက်ရှိနေရင် သင်ဟာ သင့်ဖခင်နဲ့ ပြေလည်အောင် နေထိုင်ရသလို ချစ်သူနဲ့လည်း အဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားရမှာပါ။
ဒါ့အပြင် သင့်ချစ်သူက သင့်ဖခင်လိုမျိုး အလွန်အမင်း သရော်တတ်သူဖြစ်နေလို့ သူဟာ သင့်ရဲ့ တကယ့် ဘ၀ လက်တွဲဖော်ကောင်း မဟုတ်သည့်တိုင်အောင် သင်သူ့ကို ချစ်မိသွားတာမျိုးပါ။
၃) ကိုယ့်ကို ရယ်မောအောင်လုပ်နိုင်လို့
သင့်ချစ်သူမှာ ဟာသဥာဏ်ရှိခြင်းဟာလည်း သူ့ကို ဆက်ချစ်နေ နေမိတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ပါ။ သင့်ကို ရယ်မော ပျော်ရွှင်စေတဲ့ ကောင်းကွက်ကြောင့် သင်နဲ့ သင့်လျော်တဲ့ လက်တွဲဖော်ဖြစ်မဖြစ်ကို အကဲဖြတ်ဖို့ ခက်ပါတယ်။
တကယ်တော့ သင့်လက်တွဲဖော်နဲ့ အတူနေဖူးတဲ့ အတွက်ကြောင့် တမူထူးခြားတဲ့ နှောင်ကြိုးက ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ အတူတူ နေထိုင်ကြတဲ့အခါ သူနဲ့ အတူ အချိန်တွေ အများကြီး ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး သက်တောင့်သက်သာ ပျော်ရွှင်မှုတော့ အထိုက်အလျောက် ရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ ဆက်ဆံရေး နှစ်ခုကတော့ အကွာကြီးကွာပါတယ်။
၅)ဘ၀ရဲ့အဓိကကျတဲ့ အတွေ့အကြုံကို သူနဲ့အတူ ဖြတ်သန်းဖူးလို့
ဒီလိုမျိုး အတူဖြတ်သန်းဖူးတာကလည်း သင်တို့နှစ်ဦးရဲ့ ချစ်ခြင်းကို ကြာရှည်စွာ ဆက်လက်ထန်းထားနိုင်ခြင်းတစ်ခုပါပဲ။
ဥပမာ သင့်ချစ်သူက သင်ဘွဲ့ယူတဲ့အချိန်၊ သင်အိမ်ပြောင်းရွေ့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်မှာ ကြီးကြီးမားမား အောင်မြင်မှု ရလာဒ်ရတဲ့အခါ ရှိပေးနေတာမျိုးပါ။ သူ့ကို ထားသွားသင့်တယ်လို့သင်သိနေနေတာတောင်မှ ဒီလိုမျိုး အခြေအနေတွေက ချစ်သူနဲ့ဆက်လက်လက်တွဲပြီး အောင်မြင်မှုကို အတူမျှဝေဖို့ ဖြစ်လာစေပါတယ်။
၆) ချစ်သူက အရမ်းချမ်းသာလို့
ငွေဟာ အချစ်ကိုမ၀ယ်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေမှာ ငွေကြောင့် သင်လူ တစ်ယောက်အပေါ်မြင်တဲ့ အမြင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိသာတဲ့ သက်ရောက်မှု တစ်ခုတော့ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ငွေဟာ အောင်မြင်မှုကို ကိုယ်စားပြုတယ်၊ ငွေနဲ့ ဘေလ်ဆောင်နိုင်တယ်၊ ပစ္စည်းကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်၊ လူမှုအသိုင်းအ၀န်းမြင့်မြင့် နေနိုင်တယ်။ ပြီးတော့ နောက်ထပ်နောက်ထပ် အများကြီး လုပ်နိုင်သေးတယ်။
ဒီငွေကပဲ သင်တို့နှစ်ဦးမှာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံမှု လုံးဝရှိမနေတာကို ဖုံးကာ ပစ်လိုက်တယ်။ သင်က ဒီငွေကြောင့် ချစ်သူကို ဆက်ချစ်တာဖြစ်နေကြောင်း သတိပြုမိရင် ချစ်သူမှာ ငွေကြေး မပြည့်စုံတော့ရင်ကော သင်ချစ်နိုင်သေးရဲ့လားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးပါ။
၇) ရှည်လျားတဲ့ ဆက်ဆံရေးရှိလို့
ဒီအချက်ကတော့ အရိုးအရှင်းဆုံးပါပဲ။ သင့်လက်တွဲဖော်ဟာ သင်နဲ့ ဆက်လက်တွဲဖို့ အဆင်မပြေတော့မှန်း သိနေတာတောင် ဒီအချက်ကြောင့် သင် သူနဲ့ လမ်းမခွဲနိုင်သေးပါဘူး။
ဒီအချက်ဟာလည်း သင်ဆက်ချစ်နေခြင်းရဲ့ အကြောင်းတစ်ခုပါ။ လက်တွဲဖော်တစ်ယောက်က ကြင်နာတတ်တာ ကောင်းတဲ့အချက်ပါ။ သူ့ကြင်နာမှုကို သင်က လမ်းခွဲမှု ပြန်ပေးပြီး တော့ အဆုံးသတ်ချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကြင်နာမှုတစ်ခုတည်းကြောင့်နဲ့တော့ ဆက်လက်တွဲမနေသင့်ပါဘူး။ သူက သင့်ကို ဘယ်လိုပဲ ယုယပြ၊ သင့်အနေနဲ့ရိုးသားမှုရှိပြီး ယဉ်ကျေးသူတစ်ယောက်ကို ရှာတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။
၉) ချစ်သူနဲ့တူတဲ့ အချက်တွေ များလို့
ချစ်သူနဲ့ တူတဲ့ အချက်တွေများလို့ သူနဲ့ အတူလက်တွဲဖြစ်နေတာလို့ သင်ထင်ကောင်း ထင်နိုင်ပါတယ်။ဆိုလိုတာက ရုပ်ရှင်ကား၊ သီချင်း အကြိုက်တူတာ၊ တူညီတဲ့ အဖြစ်အပျက်မျိုး စတဲ့ အကြောင်းအရာ လေးတွေကြောင့်နဲ့ တော့ အတူဆက်လက်တွဲဖို့ဟာ လုံလောက်တဲ့ အကြောင်းရင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအသေးအဖွဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု တူနေတာထက် ကျန်းမာပျော်ရွှင်ဖွယ် ဆက်ဆံရေးရှိဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
ဒီအချက်တွေက သင်ဟာ သင်နဲ့ သဟဇာတ မဖြစ်တော့တဲ့ ချစ်သူကို လမ်းလွဲနေတဲ့ အချက်တွေကြောင့် မစွန့်လွှတ်နိုင်သေးတာလားဆိုတာ ပြန်လည် သုံးသပ်နိုင်ဖို့ အကူအညီပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 08:10:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 08:08:00 AM No comments:
ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲ မေးရင်။ ကိုယ်ကြုံနေရသမျှတွေအပေါ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကောင်းကလေး ထားတတ်ရင် ပါရမီဖြည့်တယ်။
ခင်ပွန်းသည် ယောက်ျား၊ အိမ်သူသက်ထား ဇနီးမယား သားသမီး၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက် ကြီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ လောကအရေးတွေ ကြုံတွေ့ကြရပါတယ်။ အဲဒီ ကြုံတာတွေ အားလုံးကို စိတ်ကောင်းလေး ထားလိုက်ပါ။ စိတ်ကောင်းလေး ထားလိုက်ရင် ပါရမီ ဖြစ်ပါပြီ။ ပါရမီ ဆိုတာ သီးခြား မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သူ့ဟာသူ အလိုလိုမပြည့်ပါ။ စိတ်ကောင်းတွေထားပြီး ပြုပြောကြံစည်ရင် ပါရမီဖြည့်တယ်ခေါ်ပါတယ်။ စိတ်ကောင်းထားနိုင်ရင် ပါရမီ ပြည့်တယ်။ စိတ်ကောင်း မထားနိုင်ရင် ပါရမီ မပြည်ပါ။
စိတ်ကောင်းဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေသာ ထားလို့ရတာ မဟုတ်ပါ။ လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး အားလုံး စိတ်ကောင်းထားလို့ ရပါတယ်။ တကယ်ပြောရင် စိတ်ကောင်းထားရင် ပါရမီဖြည့်လို့ ပါရမီပြည့်ပါတယ်။ စိတ်ကောင်းထားရင် ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့လူ ဖြစ်လာပါတယ်။
မိမိ မိသားစုထဲမှာတင် လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဘယ် မိသားစုဝင်က ကြီးပွားသွားသလဲ၊ ဘယ်သူက မြင့်မြတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လဲ။ သားမို့လို့ အထင်မသေးနဲ့၊ သားကို မိဘတွေက လေးစားရတာ တစ်ပုံကြီးပါ။ သမီးမို့လို့အထင်မသေးပါနဲ့၊ သမီးကို မိဘတွေက လေးစားရတာတွေ တစ်ပုံကြီး အများကြီးပါ။ မိဘကို သားသမီးက လေးစားတယ်။ သားသမီးကို မိဘက လေးစားတယ်။ ဘာလို့ လေးစားတာလဲ ဆိုရင် သူက ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ သူမို့လို့ပါ။ ဘာလို့ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တာလဲ ဆိုရင် သူတော်ကောင်း စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်နေလို့ပါပဲ။ ဘုန်းတော်ကြီး မြတ်စွာဘုရား ပါရမီဖြည့်တာကိုပဲ ပြောကြပါစို့။ အဲဒါကို ကိုယ့်အိမ်မှာ ကိုယ်လုပ်နေတာနဲ့ ပြန်ယှဉ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
တစ်အိမ်လုံးမှာ စိတ်ကောင်းလေးမွေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင် – အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ် ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လာမယ်။ မိဘဆိုရင် ကိုယ် မွေးထားတဲ့ ကိုယ့်သားသမီးတွေကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူ စိတ်ကောင်းထားလို့ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လာသလဲဆိုတာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါမှ မဟုတ်ရင် မိမိ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အခု အသက် ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၀ ရှိပြီး ငယ်ငယ်တုန်းက သူလိုကိုယ်လို နေခဲ့တဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေထဲမှာ ဘယ်သူကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လို့ အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့် နေနိုင်သလဲ၊ လောကမှာ ဒါတွေ ကြည့်ရင် ကိုယ် ဘာတွေ ကျင့်ရမလဲဆိုတာ သိလာနိုင်ပါတယ်။ သဗ္ဗညုတဉာဏ်၊ အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်ကိုရရင် ရောက်ရင် ဘာလို့ ရရတာ၊ ရောက်ရတာလဲဆိုရင် ပါရမီဖြည့်ခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပါရမီ ၁၀ ပါးထဲက ဒါန အကြောင်းကို ပြောချင်ပါတယ်။ ဆက်ရန်. . . ဓမ္မဒူတဆရာတော်၏ “လိုရာခရီးရောက်ဖို့” စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 08:07:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 08:05:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 08:04:00 AM No comments:
အရွယ်ရောက်ပြီး အမျိုးသမီးများအဖို့ အချိန်တန်အခါသင့်ပြီဆိုပါက
ဘ၀အိမ်ထောင်ကို ထူထောင်ကြရစမြဲပါ။ လောကဓမ္မတာ အရ အဖိုနှင့်အမ
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြရာဝယ် အမျိုးသမီးများက လူသားတို့ မျိုးဆက်တာဝန်ကို
မိခင်လောင်းအဖြစ် ကိုယ်ဝန် ဆောင်ပေးကြရပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ဟာအမျိုးသမီးတွေအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသလို၊ တပြိုင်တည်းမှာဘဲ
စိတ်ကြည်နူးခြင်း၊ ၀မ်းနည်းခြင်း၊ စိုးရိမ်အားငယ်ခြင်း၊
အလိုလိုဒေါသထွက်ခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း စတဲ့
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကြုံတွေ့ခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါ့ပြင်ခန္ဓာကိုယ်ဇီဝကမ္မပြောင်းလဲသွားခြင်းကြောင့် ကိုယ်အလေး ချိန်တိုးလာခြင်း၊
ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ အိပ်ချင်ငိုက်မြည်းခြင်း၊
ဟိုမုန်းပြောင်းလဲ၍အ်ိပ်မပျော်ခြင်း၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း စတဲ့
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုလည်း မွေးဖွားခါနီးထိ ကြုံတွေ့ ရတတ်ပါတယ်။
အောက်ပါနည်းလမ်း (၁၄) သွယ်က မိခင် လောင်းများ စိတ်ရွှင်လန်းစေဖို့ အတွက်
(၁) အချို့ သော မိခင်လောင်းများဟာ ရင်သွေးကို ၀မ်းတွင်လွယ်ရသော ပထမ
၃-လတာကာလအတွင်း ပျို့ အန်တဲ့ ဝေဒနာကို ခံစား ကြရပါတယ်။ ထိုဝေဒနာမှ
ကင်းဝေအောင် (က) လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကျိုချက်ထားတဲ့ နွားနို့ ၁-ခွက်ထဲကို
ထန်းလျက် ၁-ခဲ(သို့ မဟုတ်)၂-ခဲထုချေ၍ ထဲ့ဖျော်သောက်ပါ (ခ) ထမင်းစားဇွန်း
၁-ဇွန်းပမာဏရှိသော ဥသျှစ်သီးမှည့် နှင့် သကြားတို့ ကို ဆ တူရော၍
ဆန်ဆေးရည် ၁-ခွက်ထဲသို့ရောဖျော်သောက်ပါ (ဂ) သင်္ဘောသီးမှည့်ကို
(၂) ထို့ နည်းတူ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ပထမ ၃-လတာအတွင်း
ဟော်မုန်းအဆင့်မြင့်တက်လာတာကြောင့်လည်း စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ် လာပြီး
(၃) ကိုယ်ဝန်ရင့်လာလေ ခန္ဓာကိုယ် တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာလေဖြစ်တာကြောင့်
သွေးထဲမှာ သကြားဓာတ်ပမာဏ နည်းလာ ပြီး မူးဝေလာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်
သွေးအတွင်း သကြားဓာတ်ပုံမှန်ရရှိစေဖို့ အတွက် နည်နည်းနှင့် မကြာခဏဆိုသလို
(၄) စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း နှင့် ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းတို့ က
မိခင်လောင်း၏ ဦးနှောက်သွေးကြောတွေကို ရောင်ရမ်းစေတတ်လို့ ၊
(၅) ၂၁-ရာစု အမျိုးသမီးအများစုဟာ
ကဖိန်းဓာတ် ရုတ် တရက်ဖြတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်
ကော်ဖီမသောက်သင့် သော်လည်း စိတ်ဖိစီးမှုပြေလျော့စေဖို့ အတွက်
(၆) များသောအားဖြင့် သားဦးကိုယ်ဝန်ဆောင်သူ မိခင်လောင်းများမှာ
စိတ်ထိခိုက်လွယ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုမဖြစ်ရအောင် အသက်ပြင်းပြင်း ရှုသွင်း
ရှုထုတ်လုပ်ပါ။ စိတ်ငြိမ်အောင် တရားမှတ်ပါ။ အဓိဌာန်ပုတီးစိပ်ပါ။
(၇) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်
ရေမှန်မှန်ချိုးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပူအိုက်သော်လည်း အ ကြောင်း
အမျိုးမျိုးကြောင့် ရေမချိုးဖြစ်ပါက မျက်နှာ နှင့် နဖူးပေါ်မှာ
(၈) တစ်နေ့ ကို နာရီဝက်ခန့်လမ်းမှန်မှန်လျှောက်ပါ။ အဲဒီလို
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက ဦးနှောက်မှ အန်ဒေါ်ဇင်ဟော်မုန်းကို
မွေးဖွာစဉ်နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကို လျော့ပါးသက်သာစေပါ တယ်။
(၉) ကိုယ်ဝန်ကိုလက်ဖြင့် အသာပွတ်၍ ဘုရားစာဆိုပေးခြင်း၊ မိမိရင်သွေးကို
မည်မျှချစ်ခင်မျှော်လင့်နေကြောင်း အားပေးစကား ပြောပေးခြင်း စသည်တို့ ကို
မကြာခဏလုပ်ပေးပါ။ ဒီနည်းက စိတ်ဖိစီးစေတတ်သော
ဟိုမုန်းထွက်ရှိမှုကိုပြေလျော့စေတဲ့အပြင်၊ မိခင်နှင့် ရင်သွေးငယ်တို
(၁၀) မီးဖွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အတွေ့ အကြုံရှိသူများ၏စကားများ နှင့်
ကျန်းမာရေးသုတစာများကို နှိုင်းယှဉ် ဖတ်ရှုပြီးနောက် နားဝေတိမ်တောင်
ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ခေါင်းအေးအေးထားပါ။ မိမိကိုယ်ဝန်ထားအပ်သော
ဆရာဝန်၏ညွှန်ကြားချက် အ တိုင်းသာ လိုက်နာပါ။
(၁၁) သားဦးကိုယ်ဝန်ဆောင်ရသူများအဖို့ မီးဖွားခြင်းအတွေ
့အကြုံမရှိသေးတာကြေင့်လည်း စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိပါနှင့်။ ခေတ်မှီဆေး
သိပ္ပံနည်းပညာများ တိုးတက်ခေတ်မှီနေသည့်အတွက် "ယောကျာ်းဖောင်စီး၊
မိန်းမမီးနေ" ဆိုတဲ့ စကားကို ရာဇ၀င်ထဲမှာသာ ထားရစ်ခဲ့ပါတော့။
(၁၂) အာထရာလ်စောင်းကြည့်၍ မွေးလာမည့်ကလေးကို သားသား၊ မီးမီး ကြိုတင်ခန်
့မှန်းလေ့ရှိကြပါတယ်။ သို့ သော် အာထ ရာလ်စောင်း အဖြေက ၁၀၀
ရာခိုင်နှုန်းမမှန်တတ်တဲ့ သာဓကများရှိတာကို သတိချပ်ပါလေ။
(၁၃) ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာခြင်း နှင့်
ဗိုက်ကြောများပြတ်ခြင်းတို့ ကြောင့် အလှပျက်မှာကိုတွေးမပူပါနှင့်။ ဒါ
ယာယီသာဖြစ်ပြီး၊ ကလေးမွေးပြီးနောက် ကာလတစ်ခုအကြာမှာ ဗိုက်ကြောပြတ်တာတွေက
သူ့ အလိုလိုပြေပျောက်သွားသလို၊ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျသွားအောင်လည်း
(၁၄) အလှအပမြတ်နိုးသူ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ ကလေးမွေးပြီးနောက်
ဗိုက်ကြောမပြတ် အလှမပျက်စေဖို့ အတွက် အောက် ပါ နည်းလမ်းကောင်းများကို
(က) ဗီတာမင်အီး ဆေးတောင့်ဖောက်၍ လိုးရှင်းအဆီအဖြစ်
အရေပြား ပေါ် သုတ်လိမ်းပါ၊ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း စစ်မှန်တဲ့ ဗီတာမင်အီးကို
(ခ) အုန်းဆီကလည်း ဗီတာမင်အီးလိုဘဲ အသား ရေကို အားဖြည့်၍
အကြောပြတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်တာကြောင့် အုန်းဆီလိမ်းပါ၊ အုန်းဆီထဲကို
လက်ဖက်ဆီ အ စက်အနည်းငယ်ထဲ့ပြီး လိမ်းရင် အာနိသင်ပိုကောင်းပါတယ်
ကော်ဖီစေ့ မှုန့် တွေကလည်း အကြောပြတ်ရာမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ကုသပေးနိုင်ပါတယ်၊
ကော်ဖီစေ့မှုန့် ကို ရေပျစ်ပျစ်ဖျော်၍လိမ်းပါ(နောက်တစ်နည်း)ကော်ဖီစေ့မှုန်
့ကို ရှားစောင်းလက် ပတ်အနှစ်(သို့ )သံလွင်ဆီရောပြီး နေ့ စဉ်လိမ်းပေးပါ၊
မိနစ် ၂၀ ခန့် အကြာ ကြက်သီးနွေးရေနဲ့ညင်ညင်သာသာ ဆေးကြောပါ
ကြက်ဆူဆီဟာ အကြောပြတ်ရာကို ကုသပေးနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးသဘာဝဆေးပါဘဲ၊ အဆီက
ပျစ်လွန်းရင် သံလွင်ဆီ ရောထည့်ပြီး ကျဲအောင်လုပ်ကာ လိမ်းပေးပါ၊ အသာအယာ
နှိ်ပ်နယ်ပြီး ၁၀-၂၀ မိနစ်ကြာ ထားလိုက်ရင် အရေပြားထဲကို အဆီ
(င) shea butter က အသားအရေကို
အစိုဓာတ်ထိန်းပေးနိုင်တဲ့ အဆီဖြစ်တာကြောင့် လိမ်းထားရင်
ရေဓာတ်ပြည့်နေစေပါတယ်၊ shea butter ပါတဲ့ ခရင်မ်လိမ်းတာကြောင့်
အရေပြားတင်းအားကို ကောင်းမွန်စေပြီး အကြောပြတ်ရာကို သက်သာစေပါတယ်
(အထူးသတိပြုရန်မှာ ၄င်းနည်းများကို ကလေးမီးဖွားပြီးမှ လိမ်းကြပါရန်
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 08:02:00 AM No comments:
အိမ်ထောင်ရေးသုခ ပြည့်ဝစေရန် အမျိုးသားများ ကော်ဖီသောက်သင့်
တစ်နေ့ကို ကော်ဖီနှစ်ခွက်သောက်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ချစ်သူ၊ ဇနီးမယားတွေနဲ့ ကိုယ်လက်နှီးနှောတဲ့အခါ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုပြည့်ဝလာတက်ကြောင်းကို သုတေသနတစ်ခုက ဖော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
လူပေါင်း လေးထောင်နီးပါးကို စမ်းသမ်ခဲ့တဲ့ဒီစမ်းသပ်မှုအရ အမျိုးသားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာ ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်လက်နှီးနှောတဲ့နေရာမှာ စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းချင်ရင်တော့ တဖက်မှာရှိတဲ့ ကော်ဖီရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကို ဂရုစိုက်နေလို့ မရပါဘူး။ ကော်ဖီလုံးဝ မသောက်သူနဲ့ ကော်ဖီသောက်သူ အမျိုးသားအုပ်စုနှစ်စုခွဲပြီး လေ့လာခဲ့ရာမှာ ကော်ဖီသောက်တဲ့ အုပ်စုကအမျိုးသားတွေဟာ အရင်ထက် ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပိုပြီး ကိုယ်လက်နှီးနှောမှုမှာ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး တစ်နေ့ကို ကော်ဖီလေးခွက်လောက် သောက်မယ်ဆိုရင်တော့ အစာအိမ်ရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ ကတုန်ကယင်ဖြစ်ခြင်းအပြင် ကော်ဖီနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အခြားရောဂါဝေဒနာတွေကို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကော်ဖီမှာပါတဲ့ ကဖိန်းဓါတ်ဟာ အမျိုးသားအင်္ဂါထဲကို သွေးတွေပုံမှန်စီးဆင်းပြီး သွေးလွှတ်ကြောနဲ့ ကြွက်သားတွေကို လန်းဆန်းစေတယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ယူဆထားပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်တွက်ချက်မှုတွေအရ အမျိုးသား အသက် ၄၀ နဲ့ ၇၀ ကြားရှိသူတွေက လိင်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းတဲ့ ရောဂါကို ကုစားနေရပါတယ်။ ကိန်းဂဏန်းအရဆိုရင်တော့ တနေ့ကို ကဖိန်းဓါတ် ၈၅ မီလီဂရမ်ကနေ ၁၇၀ မီလီဂရမ်လောက် သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 07:58:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 07:57:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 07:56:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 07:55:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 07:54:00 AM No comments:
Ronnie Brower လို့အမည်ရတဲ့ အမျိုးသားဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်က အလေးချိန် ၆၇၅ ပေါင် ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ Post တွေကို Facebook ပေါ်တင်ပြီး ဒါကို သူ့ရဲ အထက်တန်းကျောင်း ဆရာက မြင်သွားပါတယ်။ ဒြါောင့်မို့ အထက်ကျောင်းမှာ သူ့ကို စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာက သူဖြစ်နေတဲ့ အခြေအေနကို သနားပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားစေရန် တွန်းအားပေးခြင်း၊ Gym သို့ သွားစေခြင်းတို့ လုပ်ပါတယ်။ Personal trainer များလည်း ရှာဖွေပေးပါတယ်။
Facebook မှာ ဝိတ် ပေါင် ၆၀၀ ချမယ့် Milestone ကိုတင်ခဲ့ပြီး ကြိုးစားလာလိုက်တာ ယနေ့တော့ သူဟာ ပေါင် ၄၀၀ ချနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဆက်ပြီးတော့လည်း ကြိုးစားနေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ယင်းသို့ တစ်စိုက်မတ်မတ် ကြိုးစားစေမှုထဲမှာ ဆရာ အပြင် တေလာဆွစ်ဖ်လည်း ပါဝင်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ တေလာဆွစ်ဖ်ရဲ့ သီချင်းများကို နားထောင်ပြီး အားတက်ပါတယ်။ Gym ကစားနေစဉ်မှာလည်း တေလာဆွစ်ဖ်ရဲ့ သီချင်းများကို နားထောင်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ကို ယခုလို ဖြစ်လာအောင် အားပေးတဲ့အထက်တန်းကျောင်း ဆရာကို လာမယ့် ဇွန်လဆန်း တေလာဆွစ်ဖ်ရဲ့ ရှိုးပွဲလက်မှတ် လက်ဆောင်ဝယ်ပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 07:51:00 AM No comments:
ဒီလိုနဲ့ နှစ်တွေ ကြာလာတော့ အသက် ၁၄ နှစ်လောက်မှာတော့ ကောင်မလေးဟာ အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ နှလုံးရောဂါခံစားပြီး ဆေးရုံတက်လိုက်ရတယ်။ ဆရာဝန်တွေက သူ့အဖေကိုပြောတယ်။
” ခင်ဗျားသမီး အခြေအနေအရမ်းဆိုးနေပြီ သိပ်မကြာခင် သူသေမှာပဲ ” လို့ပေါ့
သူ့အဖေကတော့ စိတ်မပူသလိုနဲ့ ” ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ ကျွန်တော်သူ့အတွက် အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတာတွေရှိပါတယ် ”
သိပ်မကြာဘူး။ သူ့အဖေဟာ ဆေးရုံလာတဲ့လမ်းမှာ ကားအက်ဆီးဒင့်ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ရက်အနဲငယ်ကြာတော့ ကောင်မလေးကို လာပြောတယ်။မင်းအရမ်းကံကောင်းတာပဲ မင်းနှလုံးအတွက် အလှူရှင်ရှာတွေ့ပြီတဲ့။
နောက်မကြာဘူး ကောင်မလေး အခြေအနေတိုးတက်လာတော့ အိမ်ပြန်လာတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူ့အသက်ကလဲ ၁၅ နှစ်ပြည့်ပြီးပြီပေါ့။သူဟာ သူ့အိပ်ယာမှာ လှဲအိပ်လိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အိပ်ရာအောက်က ခုလုခုလု ဖြစ်နေလို့ အခင်းကို လှန်လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ သူ့အဖေချန်ထားတဲ့ စာအုပ်လေးတွေ့သွားတယ်
” ငါ့သမီး ဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာ ၁၅ နှစ်ပြည့်ပြီးလောက်ပေါ့ သမီးမွေးကတည်းက နှလုံးမကောင်းတာကို အဖေအစောကြိးကတည်းက သိပြီးသား အဲဒါကြောင့် အဖေ့နှလုံးကို ကြိုတင်လှူဒါန်းထားတယ်သမီး။
သမီးဒီလို အသဲအသန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာလဲ အဖေခန့်မှန်းပြီးသား။ ဒါပေမယ့် သမီးဖြစ်တာ အဖေမှန်းထားတာထက်စောတဲ့အတွက် မတတ်နိုင်ဘူး။ သမီးအတွက် ၁၅ နှစ်ပြည့်လက်ဆောင်အဖေပေးခဲ့ပါတယ်။
အဖေ့ရဲ့ အသည်းနှလုံးလောက်ချစ်ရတဲ့ သမီးလေးအတွက် အဖေ့ရဲ့ နှလုံးက လက်ဆောင်ကောင်းဖြစ်မှာပါ ”
မိဘတွေရဲ့ သားသမီးအပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်ကို ခံစားနိုင်မည့် ၀တ္တုလေးဖြစ်မှာပါ။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 07:50:00 AM No comments:
မရစေ၇န်ဂရုစိုက်ပြီးကစားရပါမည်။ပေါင်လေ.ကျင်.ခန်းများတွင်ပုံမှန်ထိုင်ထနှင်.အလေးကို ညှပ်ရိုးပေါ်တင်သောထိုင်ထ (FRONT SQUAT)ကိုလည်းရံဖန်ရံခါ လေ.ကျင်.သင်.ပါသည်။
ပါသည်။ယခုဖော်ပြမည်.ပေါင်လေ.ကျင်.ခန်းများမှာSUPERSETနှင်. ပေါင်ကြွက်သား လေ.ကျင်.နည်းဖြစ်ပါ
သည်။ထိုလေ.ကျင်.ခန်းများတွင်ပါဝင်နေသောSUPER SETS အတွဲများမှာ-
(1)-ပေါင်အပြည်.ထိုင်(FULL SQUAT) 15ကြိမ် ကစားပြီးတာနှင်.ပေါင်ရှေ.သားဆန်.(LEG EXTENSION) 15ကြိမ် ဆက်ကစားပါမည်။ ၄င်းကဲ.သို.အကျော.ပေါင်း (၃)ကျော.
(2)-အလေးကို ညှပ်ရိုးပေါ်တင်သောထိုင်ထ (FRONT SQUAT)၁၅ကြိမ် ကစားပြီးဆက်ကစားရမည်မှာ
ပေါင်နောက်သားဆွဲ(LEG CURL) 15ကြိမ် ထိုကဲ.သို.အကျော.ပေါင်း(၃)ကျော.
(3)-ခြေစု၊ဒူးနှစ်ဘက်စုပြီးပေါင်တစ်ဝက်ထိုင်(HACK SQUAT) 15ကြိမ်ကစားပြီး
ဘားတို(သို.)ုဘားရှည်ကိုင်ခြေခွဲလမ်းလျှောက်(DUMBBELL LUNGS)ခြေလှမ်း (၃၀)+ ၃ကျော.စသည်.အတွဲများဖြစ်သည်။
Ref: super sets of Thigh By Joe weider’s Training Principle
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 07:48:00 AM No comments:
အင်တာနက်ကနေ ဖတ်ဖူးခဲ့တာလေးပါ.. အဓိပ္ပါယ် ရှိလှပါတယ်...။
လျှပ်စစ်မီးကို တီထွင်တဲ့ အက်ဒီဆင်က သူ့ရဲ့လက်ထောက်အကူနဲ့ မီးသီးကို တီထွင်နေတယ်… မောပန်းစွာ ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ကိုင်ပြီးနောက် အောင်မြင်သွားခဲ့တယ်..။
အက်ဒီဆင်က တီထွင်အောင်မြင်လို့ပြီးသွားတဲ့မီးသီးကို တခြားစမ်းသပ်ခန်းသို့ သူ့ရဲ့တပည့်လက်ထောက်ကို သယ်ဆောင်ခိုင်းတယ်။ တပည့်က သေချာဂရုစိုက်စွာ တလှမ်းချင်း လှေခါးပေါ်တက်တယ်… လက်ထဲက မီးသီးလေးကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့သယ်တယ်။
ဂရုစိုက်လေ စိတ်တွေကပိုလုပ်ရှားပြီး လှေခါးပေါ်ရောက်ခါနီးမှာ မီးသီးကျကွဲသွားတယ်…
အက်ဒီဆင်က ဘာမှအပြစ်မတင်ခဲ့ဘူး။ နောက်ရက်အနည်းငယ်ကြာ ပြန်တီထွင်ပြီး ရလာတဲ့ မီးသီးကို သူ့ရဲ့တပည့်ကိုပဲ ပြန်ယူခိုင်းတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ တပည့်က ချောမောစွာ သယ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။
ဒါကိုကြည့်နေတဲ့လူတစ်ယောက်က "ခွင့်လွတ်ရင်ရပြီလေ ဘာလို့ နောက်တစ်ခါ ထပ်ယူခိုင်းတာလဲ ထပ်ပြီးကျကွဲသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ"လို့ မေးတယ်။
အက်ဒီဆင်က “ ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာ ပါးစပ်ကပဲပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူး၊ တဖန်ပြန်ပြီး အခွင့်အရေးပေးရတာ” လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လည်း တခုခုကြုံခဲ့ရင် ပါးစပ်ကနေခွင့်လွှတ်နေရုံမကပဲ တဖက်သားကို အမှားပြင်ခွင့် ကြိုးစားခွင့် လေးတော့ ပြန်ပြီးပေးသင့်ပါတယ်၊ အဲဒါမှ တကယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း ဖြစ်မှာပါ...။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/31/2015 07:45:00 AM No comments: